Doorashooyinka Baarlamaanka Iyo Deegaanka Ee kal Dambe Qorshaysan Oo U Muuqda Inaanay Qabsoomi Karin Iyo Dalalka Beesha Caalamka Oo Kulamo Kaga Arrinsanaya – somalilandtoday.com
Doorashooyinka Baarlamaanka Iyo Deegaanka Ee kal Dambe Qorshaysan Oo U Muuqda Inaanay Qabsoomi Karin Iyo Dalalka Beesha Caalamka Oo Kulamo Kaga Arrinsanaya
(SLT-Hargeysa)-Doorashada Baarlamaanka iyo goleyaasha deegaanka oo hore loo qoondeeyay inay qabsoonto March 2019, ayaa waxa muuqda inaanay suurtogal ahayn inay wakhtigaas ku qabsoonto doorashadaasi.
Waxa toddobaadkan guuldaraystay dedaaladii ugu dambeeyay ee lagu doonayay in lagu xaliyo khilaaf u dhexeeya mucaaradka iyo xisbiga talada haya ee KULMIYE si meesha looga saaro caqabado hortaagan qabsoomida doorashadaas.
Sida ay Geeska Afrika u sheegeen ilo xogogaal ahi dalalka deeq bixiyayaasha ah ee taageera nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somaliland, ayaa aad uga walaacsan dib u dhac ku yimaada doorashadaas, waxaanay dalalkani ka arrinsanayaan jawaabta ay ka bixin doonaan haddii ay doorashadu mar kale dib u dhacdo. Dalalkan oo markii ay dedaaladu guuldaraysteen isugu yimid shir deg deg ah ayaa waxa ay is tuseen sida uu u xumaan karo muuqaalka ay Somaliland dunida ka iibiso ee doorashooyinka dimuqraadiyadeed haddii mar kale doorashadu dib u dhacdo, waxaanay xidhiidho la soo sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ay ka dalbadeen inaanay ka rajo dhigin in xal laga gaadho khilaafaadka sababi kara in doorashooyinku dib uga dhacaan wakhtigooda.
Waxa iyana suurtogal ah in dalalkani wefti safiiro iyo diblomaasiyiin ah u soo diraan Hargeysa si ay dhinacyada ugu dhiirigeliyeen in laga wada hawlgalo inay doorashooyinku qabsoomaan bisha March ee 2019.
Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa hore u sheegay in caalamku qaadi doono talaabooyin uu hoos ugu dhigayo xidhiidhka uu la leeyahay Somaliland haddii ay doorashooyinka Baarlamaanka iyo deegaanku dib u dhacaan.
Waddani iyo UCID oo isku dhinac ah ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay inuu burburay wada hadal u socday xisbiga KULMIYE iyo xukuumadda Madaxweyne Biixi oo ku saabsanaa in la xaliyo qaddiyadda u dhaxaysa xisbiga Waddani iyo guddiga doorashada. Xisbiga Waddani ayaa hore u sheegay inaanay ka qayb geli doonin doorasho ay qabanayaan guddiga doorashooyinka ee wakhtigani, sidaas darteedna la kala diro, laakiin xisbiga UCID ayaa dhexdhexaadin uu ka galay arrintaas wuxuu soo jeediyay aragti ah in laba xubnood oo mucaaradku soo magacaabaan, laakiin xisbiga KULMIYE ayaa ku gacan saydhay soo jeedintaas UCID iyo dalabkii Waddani labadaba.
Si kastaba ha ahaate, waxa muuqata inaanay doorashooyinkaasi ku qabsoomi Karin wakhtigaas loo qoondeeyay ee horaanta kal dambe, waxaana mar kale loo kordhin doonaa golaha wakiilada oo kuraasida 13 jir ku noqday iyo goleyaasha deegaanada oo markii labaad loo kordhin doono mudada.
Golaha guurtida oo iyagu awood distoori ah u leh arrimaha muddo kordhinta ayaa iyaguna la filayaa inay samaystaan muddo kordhin cusub.